Amanabukeni Enja Angcono Kakhulu Kuso Sonke Isimo | Izinja World
Nathi Cerezo | 22/11/2021 11:00 | Kubuyekezwe ku- 22/11/2021 11:31 | Izesekeli zezinja
Amanabukeni ezinja angumkhiqizo othize kakhulu wokuphatha izinto ezifana nokungakwazi ukuzithiba noma ukuguga, kodwa futhi ukusiza ukuqeqesha imidlwane ukuba ilinde ukuya endlini yokugezela futhi ingaphumi endlini, iphonsa ezinye izimpungushe.
Kulesi sihloko Sizobona izinhlobo ezahlukene zamanabukeni ezinja, kanye nokusetshenziswa kwazo kanye namathiphu athile lapho ukhetha futhi uwasebenzisa. Lawa ngamanabukeni enziwe anezici ezifanayo ze ukuvikela, ukulawula iphunga nokunethezeka ukuthi usuyazi, kepha lokho kuvumelana nokwakheka kwenja yakho.
Ziyalahlwa futhi ziza ngosayizi ngaphandle kokuphazamisa ukuhambaNgaphezu kwalokhu, bashiya isikhala samahhala somsila kanye nemilenze emibili yangemuva, ngakho-ke balungele ukuvikela izinja ezisemkhankasweni wokuthola imikhuba ekulimaleni emakhoneni efenisha noma ezindongeni zendlu yakho.
Amanabukeni we-TRIXIE we ...
Ngaphandle! Amanabukeni ezinja ...
Amanabukeni e-Croci C6028711 ...
Ama-Amazon Basics - Inabukeni ...
Amanabukeni Esixazululo Esilula ...
1 I-diaper engcono kakhulu yezinja
1.1 Iphakethe lamanabukeni angu-3 asebenziseka kabusha
1.2 Amanabukeni Enja Yeduna Asebenziseka Kabusha
1.3 Amanabukeni asetshenziswa kanye kwabesilisa
1.4 I-Trixie Disposable Diaper Pack
1.5 Inabukeni eliwashwayo labesifazane
1.6 I-Super absorbent diaper yabesifazane
1.7 Izingubo zangaphansi zezinja
2 Ayini amanabukeni ezinja?
2.1 Okwezinja ezindala
2.2 Ukuhluleka kwe-Urinary
2.3 Ukuqeqesha imidlwane
2.4 Abesifazane ekushiseni
3 Izinhlobo zamanabukeni ezinja
3.1 Okwezinja ezinokungalawuleki
3.2 Imibhalo ehlanzekile yezikotini
3.3 Amanabukeni emvelo
4 Amathiphu lapho ufaka inabukeni
5 Ungathenga kuphi amanabukeni ezinja
I-diaper engcono kakhulu yezinja
Iphakethe lamanabukeni angu-3 asebenziseka kabusha
Amanabukeni e-PET MAGASIN ...
Le phakethe nge amanabukeni enja amathathu asebenziseka kabusha anakho konke okudingayo ukuze ugweme izingozi kanye nokwethuka kuma-upholstery, amaragi nakosofa. Zenziwe ngendwangu emunca kakhulu futhi zinebhande lokunwebeka okhalweni ukuze zikwazi ukuzibamba kangcono. Zihloselwe ikakhulukazi ama-bitches ekushiseni (okungukuthi, ngokuya esikhathini) kanye nosayizi omncane kunalokho, nakuba kukhona osayizi abaningana namamodeli atholakalayo, kusukela kokubi kakhulu kuya kokumangalisa kakhulu (opopayi bahle kakhulu).
Emazwaneni kugqanyiswe ukuthi, nakuba kungumkhiqizo oncomekayo, thatha kuphela ukulahlekelwa, hhayi amanani amaningi wokuchama.
Amanabukeni Enja Yeduna Asebenziseka Kabusha
I-PET MAGASIN Diapers ye ...
Lawa manabukeni awaklanyelwe abesifazane, njengoba enamathiselwe njengohlobo lwebhande elivala izingxenye zabo ezikhukhumele. Ngokusobala, aziklanyelwe ukwenza i-poop noma (izinja ngokuvamile azihambi ngesisu ku-diaper ngaphandle uma zine-incontinence ye-fecal), zivele zichame. Zikhululekile kakhulu, ngoba ungazilungisa ngokuphelele nge-velcro, futhi zinezingqimba ezimbili zendwangu yokugcina i-pee. Ngaphezu kwalokho, zitholakala ngobukhulu obuhlukahlukene nemibala.
Amanabukeni asetshenziswa kanye kwabesilisa
I-Amazon Basics ihlale inemikhiqizo yekhwalithi enhle ngentengo enhle, njengaleli phakethe lama-diaper angama-30 alahlwayo ezinja zesilisa. Zingalungiswa ngokwezinga elithile kusilwane sakho esifuywayo, nakuba kufanele uqiniseke ngosayizi olungile ngokubheka itafula ngezilinganiso ezinconyiwe namasayizi. Okuhle ngalo mkhiqizo ukuthi ushintsha umbala uma inja ichamile, uzokwazi ngokushesha uma sekuyisikhathi sokuyishintsha.
I-Trixie Disposable Diaper Pack
I-Trixie, uhlobo lwesiJalimane olukhethekile ngezilwane ezifuywayo, ikunikeza leli phakethe elithokozisayo lamanabukeni asetshenziswa kanye kwabesilisa. Athuthukiswa ngosizo lukadokotela wezilwane, ngaphezu kwalokho, anebhande lokunwebeka lokuzivumelanisa ngokusemandleni akho okhalweni lwenja yakho., ngaphezu kokuba nosayizi abambalwa abatholakalayo. Ngaphezu kwalokho, isetshenziselwa ukuchama okuchichimayo.
Inabukeni eliwashwayo labesifazane
Esinye isibonelo samanabukeni ezinja, kulokhu abesifazane, abaphethwe incontinence noma abaye esikhathini. Leli phakethe liza namanabukeni amathathu afakiwe ongawageza ngesandla noma ngomshini. Zilingana kahle kakhulu, njengoba zinebhande lokunwebeka ne-velcro ezinhlangothini zombili, kanye nembobo yokuthola umsila futhi uyenze ibe ntofontofo ngangokunokwenzeka. Ekugcineni, lo mkhiqizo utholakala kumamodeli nemibala ehlukahlukene.
I-Super absorbent diaper yabesifazane
Kulabo abanenja enenkinga yokungakwazi ukuzibamba, kanyeLawa Manabukeni Alahlwayo Ophawu Lwe-Trixie Alungile. Nakuba ezinye izisho zithi ubukhulu buhle ngandlela-thile, konke kugqamisa amandla aso amakhulu okumunca, ngoba kugcina isilwane somile futhi, yiqiniso, asingeni. Zinembobo lapho umsila udlula khona futhi zikhululeke kakhudlwana: ukuze uqiniseke ukuthi i-pee ayiphunyuki lapho futhi uyilungise kangcono, namathisela iziphetho ezimbili zembobo ezisele nge-tape encane yokunamathisela (ukunakekela hhayi ukubamba izinwele).
Izingubo zangaphansi zezinja
I-Arquivet Economic Pack ...
Okokugcina, umkhiqizo ongeyona i-diaper ngokwayo, kodwa into efana kakhulu: i-soaker. Kufana nenabukeni elilahlwayo olibeka phansi ukuze inja yakho izikhulule phezulu futhi ungakushiyi konke kulahlekile. Lokhu akugcini nje ngokumunca kahle kakhulu, kodwa kunosayizi omuhle nezinamatheliso ezine ukuze zikwazi ukukulungisa phansi futhi zivimbele ukuthi zinganyakazi, ngaleyo ndlela zigweme ukwethuka okwengeziwe. Njengoba sishilo, ezokusetshenziswa okukodwa futhi ephaketheni ngalinye kunama-30.
Ayini amanabukeni ezinja?
Sicabanga ukuthi asikho isidingo sokukutshela ukuthi ayini amanabukeni ezinja, nakuba kungaba usizo kubangane bezinja abaqalayo ukwazi izizathu zokuthi kungani kungaba wusizo ukuwasebenzisa. Nokho, kuzo zonke izimo, Kutuswa ukuthi uma ubona ukuthi inja yakho iyavuza, uyiyise kudokotela wezilwane kusengaphambili ukuze uqiniseke ukuthi ithola ukwelashwa okungcono kakhulu..
Amanabukeni kukhona yenziwe ngezinto ezingamelana nemithwalo nephunga. Zilingana nomzimba wesilwane sakho njengoba ziza ngosayizi S, L noXL.
wakhe i-ultra absorbent futhi kukhona kokubili owesilisa nowesifazane, okuyingxenye ye- lokho kulungele ukushisa kwabesifazane.
La manabukeni afaka isimo esishintshekayo okhalweni ngetheyiphu yokunamathela ukuvimbela ukuchitheka. Isikhungo saso simunca ngokuphelele futhi sinamaphethelo avumela isilwane ukuba siphefumule ngaphandle kokusihlupha.
Isilinganiso se- Isikhathi sokushintshwa kwenja amahora ayisithupha kuya kwayisishiyagalombili ngosayizi nesisindo. Kunamamodeli alahlwayo naphinde asebenziseke, lawa wokugcina angena ezintweni eziwashekayo noma zendwangu ezinephedi yangaphakathi yokubamba imithwalo.
Isikhathi sokuqala uzama ukufaka inja yakho enabukeni kubaluleke kakhulu ukuyinikeza iphunga, ngoba lokhu kuzoncika ekutheni izuza ukuzethemba noma iyaphikisana nokuyisebenzisa.
Lokhu kungakho kungakuhle ukuthi wenze leli diaper lokuqala a isipiliyoni esimnandi. Shayela isilwane sakho bese uqala ukudlala naso ngokuzenzekelayo, kancane kancane simvumele ukuthi ahogele okokusebenza bese eqala ukukubeka emilenzeni yakhe yangemuva, bese ulungisa kahle izibopho ezinhlangothini ngaphandle kokumlimaza.
Ekuqaleni uzohamba ngokucophelela ngenxa yomuzwa wezinto zangaphandle emzimbeni wakho, kepha kancane kancane uzojwayela.
Lapho umuntu ekhula, kuvela izifo, into evamile kubantu nasezilwaneni. Izinja esezineminyaka ethile zingase zibe nokuvuza komchamo, noma ngenxa yokuthi kunzima kakhulu kuzo ukuthi ziphumele ngaphandle ukuze zizikhulule., ngoba abakwazi ukulawula kanye noma ngezinye izizathu ezihlobene nobudala.
Ukungakwazi ukubamba umchamo akuveli ezinjeni ezindala kuphela, kungase futhi kube uphawu lwezifo ezingathinta zonke izinhlobo zezinja, isibonelo, ukutheleleka komgudu womchamo, isifo sikashukela ... Njengoba sishilo, ungagcini nje ukufaka ama-diapers enja, myise kudokotela wezilwane ukuze anqume ukuthi yini ukungakwazi ukuzibamba nokuthi iyiphi indlela yokwelapha engcono kakhulu.
Njengoba nje amanabukeni adingeka lapho izinja zikhula, nazo ziwusizo kakhulu ekuqaleni kokuphila. Ungazisebenzisa ngesikhathi sokuqeqeshwa, ukuvimbela isilwane sakho ukuthi singavuzi i-pee futhi siyihlahle, size sifunde ukubambelela.
Njengoba kunikezwe umehluko wokwakheka kwezinja nezinja amanabukeni kukhona i-anatomically eguquguqukayo yakho kokubiliEndabeni yezinja, amabhande anamathelayo nalawo asemaphethelweni anganwetshwa noma anciphiswe ngokuya ngobubanzi bomjikelezo wokhalo lwenja yakho, ngenkathi kwabesifazane kusebenza kakhulu futhi kunethezekile.
Emidlwane yesilisa ilungile lapho beqala ukuzikhulula ekhaya; Ukusetshenziswa kwenabukeni kuvimbela ukuchitheka futhi kuqinisekisa ukuthi bavumelana kalula nokulawulwa kuze kube yisikhathi sokuhamba.
Amanabukeni aphinde avimbele abesifazane ekushiseni ukuthi bangashiyi amabala endlini yonke, nalokho abayizinja eziwumkhuba walabo abanezinja ezingenayo i-neuter, kusukela ngaleso sikhathi lapho kufika khona umthetho ezinjeni.
Noma ngabe inja yeChihuahua, iLabrador noma iMalta, inabukeni lenja libalulekile empilweni enempilo. Ngakho-ke uma ungumnikazi wenja futhi ungazi ukuthi abiza malini amanabukeni noma uwafaka kanjani, indlela engcono yokuthola lokhu ngokucabanga izinhlobo, uhlobo nosayizi wesilwane sakho.
Usayizi wenja yakho kubalulekile ukuthola imodeli ye- inabukeni elifanele elilingana naye. Ukuze wenze lokhu, linganisa okhalweni lwesilwane sakho bese ubhekisa kumiyalo ye-diaper efanele.
Uma ufuna inabukeni enkulu yenja, ungakhetha ngokushesha inabukeni lenja yesayizi engu-L.
I-morphology yenja yehlukile ngokobulili bayo, ngakho-ke kuyadingeka ukuthi ucabangele ubulili benja yakho (owesilisa noma owesifazane) khetha i- inabukeni elifanelana kahle kakhulu. Izitolo zezilwane zihlinzeka ngamanabukeni ahlukahlukene ezinja.
Izinhlobo zamanabukeni ezinja
Emakethe Kunezinhlobo ezimbili eziyinhloko zamanabukeni ezinja, okungaba ngcono noma kubi ngokwezidingo zethu.
I-Los amanabukeni alahlwayo zivame ukushibhe ngandlela-thile, kodwa njengoba zisetshenziswa kanye nje, ziyingozi kakhulu endaweni ezungezile. Ngakolunye uhlangothi, uma inja yakho inenkinga okufanele igqoke inabukeni isikhathi esifushane, ingase ibe inketho yokucabangela.
I-Los amanabukeni awashekayo Zenziwe ngendwangu futhi zinjalo, ziyawasheka. Nakuba kuwumqansa ukuqaphela ukuwasha futhi kubiza kakhulu kunalawo asetshenziswa kanye, iqiniso liwukuthi angcono kakhulu endaweni ezungezile futhi ngokuhamba kwesikhathi agcina eshibhile, njengoba angaba. esetshenziswa izikhathi eziningi. Zilungele izinja ezidinga ama-diaper esikhathi eside.
Uma ufuna amanabukeni avikela isilwane sakho ekuvinjelweni okungenzeka bahlupheke ngakho, sincoma ukuthi ufune lawo amamodeli webhulukwe zinhle, ziyasebenza futhi zithambile.
Le modeli ingenye yezinja ezisetshenziswa kakhulunjengoba zilingana kahle futhi zivimbela ukuchitheka emilenzeni yazo emincane. Khumbula ukuthi lapho inja yakho inokungqubuzana kokuchama, izoqala ukuchama yonke indawo ngaphandle kokufuna ukwenza kanjalo, ngakho-ke kufanele ifake le nabukeni.
Le modeli inokukhethekile kwe- yenziwe ngendwangu ethambile kakhulu ukunikela induduzo ephelele esilwaneni sakho. Ngaphezu kokuthamba kwayo, uzophinde umangazwe ukwesekwa kwayo okuhle ngenxa yokuthinta ikhwalithi nokusebenza. Ngakho-ke uma lokhu bekuyimodeli obukade uyifuna, ungayithenga lapha.
Imibhalo ehlanzekile yezikotini
Ngenja engalawuleki noma i-bitch ekushiseni, akukho okungcono kunala mabhulukwe ahlanzekile. Eqinisweni, ukusetshenziswa ngokuhlanzeka kwala maphenti kungavikela ikhaya lakho; kungaba usofa wakho, phansi noma amakhushini.
Kuyimodeli ehlanzekile nenethezekile, ngaphezu kokuba muhle kwesilwane sakho.
Kumnandi ukugqoka, inja yakho izoyamukela ngokushesha ngenxa yokuthamba kwayo. Inzuzo enkulu yala maphenti ngeyawo Ukuvalwa kweVelcro okunikeza ukuvikelwa okungcono.
Kubalulekile ukuthi kusukela ngomzuzu wokuqala unxenxa inja yakho ukuthi ingesabi noma ingavumi ukusetshenziswa kwayo, kuze kube yilapho uyenza khona, kube lula ukuthi izokwazi ukuzivumelanisa futhi ngaleyo ndlela izokuzwa ukhululekile lapho uyisebenzisa.
Usayizi ngu lungisa ngokuya ngesilinganiso sobubanzi besisu sesilwane sakho, kungaba yi-S, ML noma i-XL. Ngamafuphi, angamabhulukwe amahle kakhulu angeke akudumaze futhi ungawakhetha kalula ngokuchofoza lapha.
Imakethe yamanabukeni nayo ifunile ukusetshenziswa kwezinto ezinhle kakhulu ezithanda ukunakekelwa nokulondolozwa kwe imvelo Futhi konke ngenxa yezinto ezifana ne-velcro, amanabukeni avele ashibhile.
Kumele kukhunjulwe ukuthi ingane isebenzisa amanabukeni angaphezu kwe-1000 empilweni yayo futhi uma kulesi sibalo manje sengeza ukusetshenziswa kwamanabukeni ezifuywayo, inani lezinto eziphonswe ezikhaleni zemvelo lizokhula kakhulu.
Ngaleyo ndlela Kunconywa ngaphezu kokusetshenziswa kwamanabukeni emvelo, amanabukeni angagezwa, ngoba anciphisa kakhulu imfucuza. La manabukeni ngosayizi S, abomvana noma aluhlaza okwesibhakabhaka futhi ungawathola Ayikho imikhiqizo etholakele..
Amathiphu lapho ufaka inabukeni
Iqiniso ukufaka inabukeni enjeni yethu kungase kudide, okungenani izikhathi ezimbalwa zokuqala. Kungakho lawa macebiso angase abe usizo kuwe:
Hlola usayizi ngaphambi kokuthi uzithenge. I-diaper enkulu kakhulu noma encane kakhulu ingase ingakhululeki kakhulu.
Qiniseka ukuthi iwumkhiqizo olungile, njenge kukhona amanabukeni abesilisa nabesifazane ngisho kuye ngokuthi hlobo luni.
Si ayibambe kahle endaweniCabangela ukuthenga uhlobo lwamahhanisi olusetshenziswa ukulingana kangcono inabukeni.
Ishintshe ngokushesha vumela isilwane sakho singcolise. Ngaphezu kokungajabulisi, ukushiya inja yakho enabukeni elingcolile kungabangela ukucasuka kwesikhumba.
Mhlanze isingezansi ngaphambi nangemuva kokushintsha inabukeni nge-a ithawula elincane elinomswakama.
Amjwayele inabukeni emvumela ukuthi ayinuke amnike izibiliboco njengoba uyigqokile.
Ungathenga kuphi amanabukeni ezinja
Kukhona izindawo eziningi ezahlukene lapho ungathenga khona amanabukeni ezinja, kungaba sezitolo ezikhethekile noma ezivamile.
Okokuqala, ku Amazon Uzothola inqwaba yamanabukeni azo zonke izinhlobo, kusukela kokulahlwayo kuya kokuwashekayo, kwabesifazane, abesilisa ... futhi, uma unenkontileka yenkonzo yabo yePrime, uzoba nawo ekhaya ngesikhathi esifushane kakhulu.
Enye yezindawo ezivame kakhulu ukuthenga lolu hlobo lomkhiqizo yilezi izitolo eziku-inthanethi zezilwane njenge-Kiwoko noma i-TiendaAnimal. Abanayo kuphela imikhiqizo yekhwalithi ephezulu lapho, kodwa bangakweluleka uma kunesidingo.
Ekugcineni, kwezinye odokotela bezilwane Futhi banama-diaper nama-pads. Yize kungenye yezindawo ezivamise ukubiza kakhulu, kulapho futhi abangakweluleka khona kangcono kakhulu, njengoba bengochwepheshe.
Sithemba ukuthi sikusizile ukuthi uthole amanabukeni ezinja aphelele esilwane sakho. Sitshele, ingabe inja yakho kwake kwadingeka iyithwale? Ingabe unawo amaqhinga wokuwagqoka noma uwakhiphe? Iluphi uhlobo lwenabukeni obelukulungele?
Indlela ephelele ye-athikili: Inja yomhlaba » Izinja ezijwayelekile » Izesekeli zezinja » Amanabukeni enja angcono kakhulu kuzo zonke izimo
Ama-Capes ezinja, ukufudumala akunakwenzeka